Cajal: Hagaha Sawirada HTML - Talooyinka ugu Sarreeya
Mawduucyada internetka badiyaa waxay ku jiraan qaabab nidaamsan ama qaab HTML ah. Bog kasta waxaa loo abaabulaa qaab gaar ah iyada oo ku xiran nooca wax ku jira. Haddii uu qof doonayo inuu soo saaro macluumaadka shabakada, waa qof kasta oo doonaya inuu helo xogta qaab habeysan oo habaysan. Tani waxay kaa caawineysaa inaad badbaadiso waqtiga loo baahan yahay in dib loo eego, lafaguro iyo abaabulida dukumeentiga kahor intaadan wadaagin. Si kastaba ha noqotee, helitaanka habka qaabaysan ma ahan mid sahlan sababta oo ah inta badan bogagga intarneed ma bixin karaan ikhtiyaarkaas si looga hortago in dadka laga qaado xaddiga xogta badan. Qaar ka mid ah goobaha, si kastaba ha ahaatee, waxay bixiyaan API-yada kuwaas oo dadka siinaya macluumaad ka saarista xogta geeddi-socodka degdegga ah.
Munaasabadaha noocan oo kale ah, ma lahaan kartid doorasho oo kaliya inaad isticmaasho barnaamijka software-ka oo la yiraahdo xoqista. Waa hab loo isticmaalo barnaamijka kombiyuutarka ee caawiya dadka isticmaala si ay u soo ururiyaan macluumaadka qaab wax ku ool ah iyo ilaalinta qaabka xogta. Lxml iyo Codsi
Tani waa maktabad ballaaran oo qaraar ah oo kaa caawinaysa falanqaynta iyo qiimeynta XML iyo HTML oo si dhakhso ah u caawisa wakhtiga kaydinta. Waxa kale oo ay waxtar leedahay in loola tacaalo arxan-darrada qashinka ee nidaamka baaritaanka. Nidaamkan, waxaad u adeegsataa codsiyada Lxml halkii laga heli lahaa urllib2-ta gudaha ah, sababtoo ah waxay tahay mid deg deg ah, mid adag oo diyaar ah..Way fududahay in lagu rakibo iyada oo la isticmaalayo tuubo lagu rakibo codsiyada Lxml iyo tuubooyinka.
Xaglaynta HTML waxay raacaan talaabooyinkan
Ku billow soo dhoofinta - halkan waxaad ku soo dejineysaa HTML ka Lxml, ka dibna codsiga soo dejinta. Isticmaal codsi ka dibna raad raac bogga internetka oo ku jira xogta aad rabto inaad soo saaro, u falanqee adigoo isticmaalaya HTML-ka HTML kadibna keydso xogta ciriiriga ah ee geedka.
Waxaad ubaahnaan doontaa inaad isticmaasho naqshadda bogga halkii aad ka qori laheed tan HTML waxay filaysaa in ay hesho xogta baytarta. Geedka, meesha aad ku keydisay xogta la falanqeeyay hadda waxa ku jira dukumiintiga HTML ee dhismaha dhirta. Waxaad ka gudbi kartaa qaabka geedka hababka kala duwan, XPath iyo CSSelect.
XPath waxay kaa caawineysaa inaad dib u hesho macluumaadka ama u hesho qaab qaabaysan sida HTML ama XML. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad ka heli karto waxyaalha XPath. Kuwaas waxaa ka mid ah Firebug Firefox ama Kormeeraha Kormeeraha. Markaad isticmaasho Chrome, kormeerida macluumaadka waa sahlan tan iyo markii aad u baahan tahay 'sax' oo kaliya oo riixaya qaybta u baahan kormeerka, dooro 'Kormeer elektarooni,' caddeey lambarka kaddibna guji midigta iyo xulashada copy XPath. Nidaamkani wuxuu kaa caawinayaa inaad ogaatid waxyaabaha ay ku qoran yihiin boggagaaga iyo halkaa, way fududahay in la abuuro su'aalaha saxda ah ee XPath oo si sax ah u codsan Lxml XPath.
Adigoo maraya tallaabooyinkan waxay xaqiijinayaan in aad xoqday dhammaan xogta aad rabto inaad ka soo qaadato web gaar ah iyadoo la adeegsanayo Lxml iyo Codsiyada. Waxaad haysan doontaa macluumaadka ku keydsan xusuusta laba liiska, isla markaana waxay diyaar u tahay kala soocidda. Waxaad ku falanqeyn kartaa adigoo isticmaalaya luqad barnaamijka sida Python ama badbaadi oo wadaag. Sidoo kale, waxaad jeclaan laheyd inaad dib u qorto ama edbiso qeybo ka mid ah macluumaadka kahor intaadan wadaagin Source .